Ny tena fampianarana amin'io Hafatra io. BNL Ministries - mg02
Ny tena fampianarana amin'io Hafatra io.
Tany ampiandohana i Eva dia tsy nihinana paoma. Nanao firaisana ara-nofo izy. “Tamin’ny Adama ve?” Tsia, Adama dia vadiny, fa ny bibilava (serpent). Tsy mbola bibilava izy tamin’izany. Fa rehefa nozonin’Andriamanitra izy dia lasa bibilava. (Gen 3). Biby afaka nitsangana izy io, ary miresaka, izay afaka niaraka tamin’dravehivavy ny tsirin’ainany. Ny olona sasany dia milaza hoe: “ilay tsy voalaza” kanefa ny zava-manan’aina rehetra dia noforonin’Andriamanitra, ary ny bibilava koa anisany. I Kaina no vokatr’io firaisana io, ny Baiboly dia milaza fa avy amin’ilay ratsy izy. Izay midika hoe “naterany”. Ny ozona nihatra tamin’i Eva dia ny fahoriana eo am-piterahana. Izay no nahatonga an’i Kristy tsy maintsy nateraky ny virijiny mba hialan’ny taranak’olombelona tamin’io fifandraisana tamin’ny bibilava io. Ny bibilava dia voaozona, “ny kibonao no handehananao”. Teo izy no lasa bibilava. Ny Baiboly dia milaza fa i Noah dia olona tonga lafatra tamin’ny androny. Izy dia tsy nisy nokianina teo anivon’ny olona niaraka taminy. Ary izy koa no tena taranak’Andriamanitra farany tamin’izany. Nanomboka teo ary dia efa nifangaro ny taranak’olombelona. Andriamanitra dia nilaza tamin-dravehivavy, fa ny taranany dia handresy ny taraky ny menarana. Adama nanome anarana ny vadiny hoe Eva satria izy no renin’ny olombelona rehetra. (Gen 3:20). Tsy Adama no rain’ny olombelona rehetra.
Ampidiro Ny Taranaky Ny Menarana
Maro ny olona no milaza fa Andriamanitra dia mirafitra ao amin’ny olona telo. Ny Ray, Zanaka, ary Fanahy Masina. Izaho dia ray, zanaka, ary olona. Fa izaho kosa manana anarana1. Ny “fiasan’ny” ray, zanaka, ary olombelona, dia miankina amin’ny fifandraisana amin’ny hafa. Tahaka izany koa Andriamanitra. Tao amin’ny Testamenta taloha dia nifandray tamintsika Andriamanitra tamin’ny hoe “RAY”. Rehefa niseho tety an-tany izy dia mba ho Mpamonjy antsika; nantsoina hoe “Zanak’Andriamanitra izy”. Ary hatramin’ny nitsanganan’ny fiangonana Pentecosta (Asa 2), dia lasa Fanahy Masina Izy, izay velona ao amin’ny fiangonany. Izy ihany ny olona iray antsointsika hoe: Jesosy Kristy. Paoly dia nifanena taminy indray andro, tahaka ny hazavan’ny masoandro amin’ny andro atoandrobe nanahary (Asa 9). Hoy Paoly, “Iza moa ianao Tompoko”. Paoly dia Jiosy, ary fantany io ihany ilay hazavana nitarika ny zanak’Israely niala tany Egypta. Nantsoiny hoe “Tompoko izy”. Dia namely ny Tompo hoe: “Izaho no Jesosy.”
Ampidiro (PDF Anglisy) Godhead Explained
Batisan. - 1933.
Ny Batisan’ny Rano, dia midika fa ny fiainantsika taloha dia maty ary nalevina, fa amin’izao kosa dia manaiky ny fiainan’i Kristy ato anantitsika. Io dia aletika anaty rano (difotra), fa tsy afafy, ary atao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo, fa tsy ny lohateny Ray sy Zanaka, ary Fanahy Masina izay ampiasan’ny fiangonana. Fampianarana (doctrine) Katolika io, ary notohizan’ny Protestanta. Satria ny anaran’ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina dia Jesosy Kristy Tompo. Ny olona rehetra natao batisa tao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia tamin’io anarana io. Ampitahako amin’ny fanambadiana tovovavy iray, tsy amin’ny anaran’ny namana, na zanaka, na olona, na dia marina daholo ary izany, fa ny anaran’ny vadiny.
Mariazy sy Divorsa.
Rahalahy Branham dia nanomboka nanazava ity hafatra ity fa misy sekolin-tsaina anankiroa. Ireo dia Legalism (Ara-dalana), sy ny Calvinism, kanefa samy diso ireo. Ny ankamaroan’ny fiangonana dia mirona any amin’ny ara-dalana, kanefa tokony ho tsaroana fa misy ny lafiny famindra-po.
Tamin’ny nitadiavany ny Tompo nahazoany an’izao hafatra izao, tany an-tendrombohiry Tucson, Ny Andry Afo dia hita niakatra sy nidina teo ambonin’ny toerana nivavahany.
Jereo ... Ny Asa nataon'ny Mpaminany.
Toko 13 - Adriamanitra Dia Mazava. (PDF)
Ampidiro (PDF Anglisy) Marriage and Divorce
Ny fahotàna lehibe indrindra.
Misy karazana fahotàna anankiroa.
Lainga, Halatra, Vono-olona sns…, dia fahotàna avy amin’ny “Zavatra natao.”
Zavatra ataon’ny olona.
Ny fahotàna lehibe indrindra anafe dia ny fahotàna avy amin’ny “Fanalàna na fanesorana”, izay TSY nanaovan’ny olona na inona na inona.
Ireo olona tsara mihevitra fa, “Tsara ny fiainako... Tsy nanota aho... Tena hanaiky ahy tokoa izao Andriamanitra e?
Fa ny TSY nataon’izy ireo dia ny nanaiky ny fanomezan’Andriamanitra maimaim-poana ilay fanavotàna avy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy maty ho azy ireo. Ary manao izany izy ireo nohon’ny Tsy Finoana.
Ny fahotàna lehibe indrindra di any Tsy Finoana.
Ny Famantarana (Dallas,TX)
Iza Moa Io Melkisedeka Io?
Andry Afo - Sorony.
Ny 3 anatin'izao
fanjakam ny lehilahy.
Ny Habe fito.
Ny Chicago Fanentanana.
« fa tamin'ny andro izay nivoahan'i Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra.
Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro hisehoan'ny Zanak'olona. »